Jereo ny lanezy any Sierra Nevada | Vaovao momba ny dia
Jereo ny lanezy any Sierra Nevada
Carmen Guillen | | España, General, Granada
Ary manontany tena aho: Moa ve ny felam-panala oram-panala voalohany efa latsaka any Sierra de Granada? Fantatrao ve i Sierra Nevada? Ny Andalosiana amin'ny ankapobeny dia mazàna mahita ranomandry any sierra, satria any amin'ny faritra hafa vitsivitsy amin'ny oram-panala dia oram-panala izy, somary voafaritra ihany ireo ary manana faharetana somary fohy.
Raha mbola tsy nitsidika ity toeram-pitsangatsanganana ski ity ianao dia mamporisika anao hijanona miaraka aminay miaraka amin'ity lahatsoratra ity: Jereo ny lanezy any Sierra Nevada.
1 Sierra Nevada sy ny toeram-pialan-tsasatra
2 Takelaka teknika an'ny toeram-pialamboly Sierra Nevada
3 Fanamarihana fohy avy any Sierra
4 Ahoana ny fomba hahatongavana any Sierra Nevada
5 Fialan-tsasatra mankany Granada
Sierra Nevada sy ny toeram-pialan-tsasatra
Sierra Nevada io no toeram-pisakafoanana ski atsimo indrindra any Eropa. Any no misy azy en ny Sierra Nevada Natural Park amin'ny tanànan'ny Dílar sy Monachil, faritanin'i Granada. Any no ahitantsika ny toeram-pitsangatsanganana ski haavo avo indrindra any Espana, izay manampy miavaka ny oram-panala. Ny tambajotran-tafondro misy lanezy izay ananany koa dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo toeram-pialan-tsasatra izay manome ny ankamaroan'ny andro fanaovana ski amin'ny mpitsidika azy.
Ao koa Hetsika maro no tanterahina amin'ny fahavaratra, noho izany ny hetsika sy ny dynamismany dia tsy voafetra ho an'ny vanim-potoana fararano sy ririnina ihany. Raha miditra an-tendrombohitra ianao, bisikileta an-tendrombohitra sy / na bisikileta Eto ianao dia afaka mampihatra azy ireo. Maoderina ny trano misy azy ary karakaraina tsara Ka fanta-daza izany ary notsidihin'ny mpanao ski an-toerana (Granada sy ny faritany) ary avy amin'ny olona avy any Espana sy avy any ivelany.
Takelaka teknika an'ny toeram-pialamboly Sierra Nevada
Niorina tamin'ny 1964 ny gara.
adiresy: Plaza de Andalucía, 4 Edif. Cetursa - 18196 Sierra Nevada - Monachil (Granada)
Kaomina akaiky indrindra: Monachil, 20 km
Tanàna akaiky indrindra: Granada, 31 km
vaovao: 902 70 80 90
Ivotoerana fitehirizana: Tel.- 902 70 80 90. Fax: 902 62 71 11
Fananganana ski: Ora fanokafana: 9.00 maraina ka hatramin'ny 16.45:XNUMX hariva.
Ny fahaizan'ny fitaterana amin'ny fomba mekanika: Mpitaingin-tsoavaly 45.207 / ora
Hantsana azo zahana: 1.200 m (ny lehibe indrindra any Espana)
Ny halavan'ny làlana voamarika: 106,7 Km
Fanamarihana fohy avy any Sierra
El Valan-javaboary Sierra Nevada Izy io dia iray amin'ireo faritra voajanahary mahaliana indrindra na amin'ny hareny voajanahary na amin'ny kolontsaina sy ny tontolo iainany. Ilaina mendrika hambara ho valan-javaboary amin'ny taona 1986 Tahirin'ny Biosfera UNESCO.
Ao amin'i sierra, mihoatra ny Karazana botanika 60Ny sasany amin'izy ireo dia tsy manam-paharoa eto an-tany, toy ny kintana oram-panala fanta-daza sy ny volomparasy Sierra Nevada. Ireo karazana roa ireo ihany no ahitanao an'ity toerana mahafinaritra ity.
Ho an'ny biby dia miahiahy, ny tandindonin'io marika io dia ny osy an-tendrombohitra ahitantsika azy ireo any amin'ny avo indrindra amin'ny tandavan-tendrombohitra. Ity biby ity dia tompon'andraikitra tamin'ny faritany Andalosiana izay tompon'andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ara-dalàna ny National Reserve Hunting, tamin'ny 1966.
Any Sierra Nevada dia tsy afaka manao fanazaran-tena fotsiny ianao fa afaka manao izany koa manaova fanjonoana. Amin'ny vanin-taona lohataona sy fahavaratra dia be ny miasa mafy mpanjono trout izay tonga teo amin'ny toerana hitsapana ny fahaizany manjono amin'ny trondro maro.
Izy io koa dia toerana mety mpandeha an-tongotra sy mpihanika fa mampidi-doza kokoa amin'ny fanatanjahan-tena izy. Ary raha ianao no voalohany indrindra, izay manomboka mandeha mitady ny toerana mahafinaritra, tsy maintsy amporisihinay ny faritra Ny Alpujarras, izay ahitanao tara-masoandro sy masoandro milentika tsara tarehy any amin'ny faritra Bubión na Pampaneira, raha tsy hitonona afa-tsy roa amin'izy ireo.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Sierra Nevada
Ny faritra voajanahary Sierra Nevada dia misy toe-javatra tena manana tombontsoa, satria misy fifandraisana tsara na ho an'ny tanànany, Granada, na ho an'ny rizany dia avy amin'ny faritany Andalosiana:
Granada 31 km.
Almería amin'ny 209 km.
Cádiz amin'ny 376 km.
Córdoba amin'ny 244 km.
Huelva amin'ny 389 km.
Jaén amin'ny 127 km.
Malaga 168 km.
Seville amin'ny 293 km.
Ho azy dia azonao atao hiditra be loatra amin'ny lamasinina avy amin'ny gara Granada (40 km), Malaga (163 km) na Seville (268 km).
Raha aleonao kosa mandehana fiaramanidinaNy seranam-piaramanidina akaiky indrindra ny gara dia Granada, izay tsy misy afa-tsy 47 km, seranam-piaramanidina Malaga 172 km ary seranam-piaramanidina Seville 291 km.
Raha fiara kokoa ianao, tsy maintsy mandray ny A-395 ianao amin'izay hahitanao ny fiantsonana eo amin'ny km 31,
Fialan-tsasatra mankany Granada
Raha te hanararaotra ny fitsidihanao ny toeram-pitsangatsanganana any Sierra Nevada ianao hahafantarana ny tanànan'ny Granada amin'ny tampony, dia mamporisika anao izahay amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona hanao izany. Granada dia iray amin'ireo tanàna izay tsara tarehy foana.
Tsy tokony hitsahatra ny fitsidihanao Ny Alhambra, mazava ho azy, raisina ho toy ny haren'ny tanàna, ny Generalife, ny Ny fijerin'i Saint Nicholas na ny Albaicín manodidina, mpifanolo-bodirindrina misy fomban-drazana, miaraka amina firazanana, misy hatsarana Azonao atao ny mankafy izany rehetra izany amin'ny hafainganam-pandehanao ary miaraka amin'ny fahalalahana tanteraka samirery na afaka mahita momba ireo fitsangatsanganana tsy voatanisa atao ao an-tanàna ihany koa ianao.
Raha mbola tsy nitsidika an'i Sierra Nevada ianao dia tsy tokony avelanao handalo fotoana intsony ... Ho fanampin'izany, ny tanànan'i Granada dia tsy maintsy ilaina, miaraka amin'ny hatsarany mahafinaritra. Hifankatia ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Jereo ny lanezy any Sierra Nevada
Inona avy ireo karazana mpitsangatsangana any ary iza no amantaranao azy?